Mampitandrina ny amin’ireo famitahana ho avy
« Fa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona Isiraely, ary hisy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo, izay hahatonga mangingina sain-diso mahavery ary handa ny Tompo Izay nividy azy aza ka hahatonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenany.» — 2 Pet. 2:1.
Amin'ny fotoana ho avy dia hisy fitaka isan-karazany hiseho, noho izany dia mila mifahatra tsara isika. Mila andry mafy orina ho an'ny fanorenana isika. Na dia singa kely iray aza dia tsy tokony hiala amin'izay naorin'ny Tompo. Hitondra fampianaran-diso ny fahavalo, toy ny foto-pampianarana manafoana ny fisian'ny fitoerana masina, ohatra. Isan' ireo hevitra maro hahatonga ny fandaozana ny finoana izany. Aiza anefa no ahitantsika fiarovana, raha tsy ao amin' ireo fahamarinana, izay ny Tompo mihitsy no nanolotra azy nandritra ny dimampolo taona farany?
Tiako ny milaza aminareo fa velona i Kristy. Manao fanelanelanana ho antsika Izy, ary dia hamonjy antsika tsirairay izay manatona Azy amim-pinoana sy mankato ny fitarihany. Tsarovy anefa, fa tsy sitrany ny hanoloranao ny herinao manontolo, hoenti-mitsikera ireo rahalahinao. Andraso ny famonjena ny fanahinao manokana. Tanteraho ny asa napetrak'Andriamanitra taminao. Ho tsapanao fa maro ny adidinao ka tsy hanana fironana hitsikera ny hafa ianao. Ampiasao ny talentan'ny fitenenana ho fanampiana sy ho fitahiana ny hafa. Raha tanterahinao ny asa natolotr'Andriamanitra anao, dia banana hafatra hotorina ianao, ary ho tsapanao ny dikan'ny hoe nohamasinin'ny Fanahy. Aza mihevitra fa mipetra-potsiny i Satana. Aza mihevitra fa tsy manao na inona na inona ny tafiny. Eo am-perin'asa izy izao miaraka amin'ireo mpanompony. Ilaintsika ny mitafy ny akaj om-piadian' Andriamanitra. Rehefa tontosantsika izany rehetra izany, dia hijoro isika hiatrika ireo fanapahana sy fahefana maro ary ny herin'ny faharatsiana eny anivon' ireo toerana ambony. Ary raha mitafy ny akajom-piadian'ny lanitra isika, dia ho hitantsika fa tsy hanan-kery amintsika ireo fanafihana ataon'ny fahavalo. Hanodidina hiaro antsika ny anjelin'Andriamanitra. Matoky aho fa hotanterahin'Andriamanitra tokoa izany. Amin'ny anaran'ny Tompo Andriamanitra no iangaviako anareo hanatona ny fanampian'ny Tompo, manoloana flay lehibe. Raha ataonao izany, dia hanana ny Mpanampy matanjaka indrindra eo anilanao ianao, dia ilay Mpamonjin'ny tenanao manokana. Ho voasaron'ny ampingan'ny fitarihana sy ny fiahian'Andriamanitra ianao. Hanokatra lalana ho anao Andriamanitra mba tsy hahazoan'ny fahavalo anao. - RH, 25 May 1905.